Namatsy boky sy fitaovana teny Vontovorona ny orinasa BENCHMARK – Malag@sy Miray
Petroleum engineering eny Vontorona :
Efa an-taonany maromaro izao no nisian’ny sampam-pampianarana manokana mampianatra sy mampiofana momba ny solika eny amin’ny Oniversite eny Vontovorona. Izany no naorina dia noho ny fisian’ireo karazana angovo maro samihafa azo trandrahina eto Madagasikara, toy ny entona, ny solika ary ny arina. Antony hafa nanokafana sy nampivoarana izany sampam-pampianarana izany koa ny tsy fahampian’ny teknisiana sy injeniera mahafehy io sehatra voalaza io.
Rehefa nahazo fankatoavana avy amin’ny ministera tompon’andraikitra ary izany tetik’asa fananganana sampam-pampianarana momba ny harena an-kibon’ny tany izany dia nosokafana ara-dalàna ary efa andiany fahadimy amin’ireo injeniera mahafehy ny momba ny solika no hivoaka ato ho ato araka ny vaovao izay voarainay.
Samy hita eo anivon’izany seha-pampianarana izany avokoa moa na ny « Upstream » (amont), izay hianarana momba ny fikarohana sy fitiliana ary ny fitrandrahana, na ny « Downstream » (aval) izay miresaka « raffinage » sy « pétrochimie ». Marihana fa amin’ny teny anglisy ny ankamaroan’ny fampianarana atao eny amin’izany departemanta misahana izany fampianarana momba ny solika izany. Ny taranja izay ampianarina ao dia mitovy amin’izay ampianarina any amin’ireo firenena efa mahafehy ny momba ny solika sy ny arina ary ny entona, toa an-dry zareo Amerikana na ihany koa ry zareo avy etsy Mozambika, izay marihina manokana fa mamoaka ihany koa ny Master en Ingénierie Pétrolière.
Fanampiana avy amin’ny orinasa indoneziana Benchmark :
Nanolotra fitaovana io Departemanta etsy Vontovorona io ny orinasa indonésiana Benchmark. Nanolotra boky maro miresaka momba ireo harena an-kibon’ny tany izay voalaza etsy ambony ry zareo ireto ary nanolotra ihany koa latabatra sy tabilio. Ankoatra izay dia nanolotra « laboratoire » feno ihany koa ity orinasa indoneziana Benchmark ity. Nisy ny valan-dresaka niarahana tamin’Andriamatoa Lala ANDRIANAIVO izay lehiben’ny departemanta Petroleum Engineering eny Vontovorona, izay nanazava sy namelabelatra izany fiaraha-miasa sy fanampiana avy any ivelany izany, izay marihina fa tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasa atsimo-atsimo (coopération sud-sud) sy ny « transfert de technologie ».
Tamin’izany no nahafantarana fa nisy manam-pahaizana indoneziana sivy tonga nampianatra teto Madagasikara, izay nalefan’ny masoivohon’ny Indonezia sy ito orinasa Benchmark ito, ary noraisin’ireto voalaza farany ireto an-tànana ny fikarakarana ireto manam-pahaizana ireto tamin’ny fotoana nandalovany. Nampianatra taranja eo amin’ny efapolo eo ireto manam-pahaizana momba ny solika avy any Indonezia ireto ary nahazo izany fampianarana izany ny taona voalohany, ny taona fahatelo ary ny taona fahaefatra teny Vontovorona. Marihina fa amin’ny faran’ny volana martsa izao no fara-fisoratana anarana hidirana amin’io sampam-pampianarana eny Vontovorona io ho an’izay mikasa hanao izany ary voafetra ny isan’ny mpianatra satria dia manodidina ny dimy ambin’ny folo isan-taona eo aloha hatreto no afaka raisina.
Raha ara-tantara no jerena dia naka traikefa tamin’ny firenena Norveziana ry zareo Indoneziana momba ny fitantanana sy ny fitilina ary ny fitrandrahana solika. Izany fahaizana izany no tiany ifampizarana amin’ny mpianatra sy mpampianatra malagasy mba ahafahan’izy ireto tonga dia mampihatra izay fahaizana sy fahalalàna ary traikefa azo.
Raha ny momba ny sehatr’asa afaka mandray ireto mpianatra ireto indray no asiana resaka dia maro dia maro izy ireo, indrindra fa ny any ivelany. Ny sakana kely ho an’ny mpianatra malagasy dia ny tsy fahafehezana ny teny anglisy izay teny tena ampiasaina amin’io sehatra io. Mangataka alàlana avy amin’ny tompon’andraikitra eto Madagasikara momba ny fahafahana manao « codiplomation » miaraka amin’ny Oniversiten’i Trisakti, izay Oniversite ampianaran’ireto manampahaizana tonga nizara fahalalàna teny Vontovorona mba hanamoràna ny fahazoana asa sy ny fanohizana ny fianarana any ivelany.
Entanina ihany koa ny fitondram-panjakàna mba hametraka ao anatin’ny taratasy fifanarahana miaraka amin’ireo orinasa tonga eto Madagasikara ny mba handraisan’izy ireo mpianatra navoakan’ny Oniversite malagasy toy ny avy eny amin’ny Polytechnique eny Vontovorona.